ပျားရည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁၀ဇွန်း
ပဲငံပြာရည် အနောက် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၅ဇွန်း
ရှာလကာရည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၄ဇွန်း
ကြက်သားမှုန့် – လကဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း
အချိုမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
နတ်နတ်ပွင့် – ၇ခု
သစ်ဂျပိုး – ၄ခု
ကလဝေရွက် – ၆ခု
နတ်မတ် (ဇာဒီပ္ဖိုလ်သီး) – ၂ခု (ခြစ်ထည့်ပေးပါ)
၁။ ၀က်အစုံ အရင်သန့်စင်အောင် ဆေးကြောပါ။ ၀က်အူမအတွက် ၀က်အူကို ပြောင်းပြန်လှန်ပြီ ၃ထပ်လောက် အစာသွပ်ပေးပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ၀က်အစုံအားလုံးကို ( ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ သကြား၊ အချိုမှုန့်၊ ခရုဆီ၊ ပဲငံပြာရည်အနောက်၊ ပျားရည်၊ ရှာလကာရည်၊ နတ်နတ်ပွင့်၊ သစ်ဂျပိုး၊ ကလဝေရွက်၊ နတ်မတ် ) ထည့်ရောနုယ်ပေးပြီး ၃နာရီခန့် ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် နုပ်ထားပေးပါ။
၄။ ပြီးမှ ဒယ်အိုးကြီးထဲ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၅ဇွန်း) ထည့် နုယ်ထားသော ၀က်အစုံကို ၂မိနစ်ခန့် အရောင်ရသည်အထိ ရောမွှေပေးပါ။
၅။ ဆီပြန်လျှင် ရေကို ၀က်အစုံမြုပ်သည်အထိထည့် မီးပြင်းပြင်းဖြင့်တည်ထားပေးပါ။ ပထမ တစ်ရေဆီပြန်လာလျှင် အသဲ၊ နှလုံး၊ လျှာတို့ကို ပြန်ဆယ်ထားပါ။
၆။ ပြီနောက် ပြုတ်ထားသော ကြက်ဥ ၂လုံးကို ထည့်ပြီ ၀က်အစုံ နောက်ထပ် ၃ကြိမ်ခန့် ရေထပ်ထည့်ပြီး ကျက်သည်အထိ အဖုံးအုပ်ပြီ တည်ပေးပါ။
၅။ ၀က်အစုံ ကျက်၍ ဆီပြန်လာပြီးဆိုလျှင် ဆော့ရည်အနည်းငယ်ချန်၍ မီးပိတ်လိုက်ပါ။
၆။ ထို့နောက် ၀က်အစုံကို ဓားဖြင့် ခပ်ပါးပါးလှီးပေးပြီ အပေါ်က ဆော့ရည်များ လောင်းထည့်ပါ။
၈။ ပြီးလျှင် ၀က်သားကို တုတ်ထိုး ပေးပါ။ အိမ်တွင် အလွယ်တကူလုပ်စားနိုင်မည့် ၀က်သားတုတ်ထိုးရရှိပါသည်။
၉။ ၀က်သားတုတ်ထိုးကို ငရုတ်သီးဆော့၊ ကြာဇံကြော်၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ တို့ဖြင့် အရသာရှိစွာ တွဲဖက်စားနိုင်ပါသည်။
ဆန်ကြာဇံ -၄၀၀ ဂရမ်
ဂေါ်ဖီ – တစိတ်(လက်မ၀က်အရွယ်များ ပိုင်းဖြတ်ပါ)
မုန်လာဥနီ – ၂ခု (အခွံနွှာပြီ အ၀ိုင်း ပါးပါးလှီးပြီ ၄ပိုင်းပိုင်းပေးပါ)
ကြက်သွန်မြိတ် – ၁စည်း (၁လက်မအရွယ် လှီးပါ)
ပဲငံပြာရည် အကြည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၁။ အရင်ဆုံး ကြာဇံ( ဂရမ်)ကို ရေ၁၅မိနစ်ခန့် စိမ်ထားပါ။ ပြီလျှင် ဇကာဖြင့် ကြာဇံများ ရေပြန်စစ်ပေးထားပါ။
၂။ ဒယ်ထဲ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း) ထည့်ပြီ ဆီပူလာလျှင် ကြက်သွန်ဖြူ ဆီသပ်ပေးပါ။
၃။ ထို့နောက် ဂေါ်ဖီ၊ မုန်လာဥနီ၊ ရေ(ခွက်၃ပုံ၁ပုံ)၊ ပဲငံပြာရည်(အကြည်)၊ ပဲငံပြာရည်(အနောက်)၊ ဆား၊ သကြား) တို့ကို ထည့်ပြီ ၁မိစန်ခန့် တည်ထားပါ။
၄။ ပြီလျှင် ဆန်ကြာဇံ ထည့်ပြီ သမအောင် ရောမွှေပေးပါ။
၅။ အရသာအနေတော်လျှင် ကြက်သွန်မြိတ်များ ဖြူပေးပြီ ၀က်သားဒုတ်ထိုးနဲ့ တွဲဖက် သုံးဆောင်လို့ရပါပြီ…
၁။ ဆော့ပြုလုပ်ရန် (Tan Choon Hwa) ငရုတ်သီးဆော့ဘူး တ၀က်ကို ဒယ်ထဲ ထည့်ပြီ သကြား(စားပွဲတင်ဇွန်း ၅ဇွန်း) ထည့်ပြီ ၁မိနစ်ခန့် ရောမွှေပြီ မီးပိတ်လိုက်ပါ။
မှတ်ချက် ။ ။ Tan Choon Hwa ငရုတ်သီးဆော့ဗူးကို ဈေးမှာပင် အလွယ်တကူ မေးဝယ်နိုင်ပါသည်။
၂။ ၀က်သားတုတ်ထိုးနဲ့ တွဲဖက်စားသုံးရန် ငရုတ်သီးဆော့ရပါပြီ…
wow eat chin tal……ku 🙁 miss the food….
ram uk thang says:
can you tell me what dish should I use for nutmeg beside ၀က်သားတုတ်ထိုး?
အဝေးတနေရာမှ ဝက်သာတုတ်ထိုးမစားရတာကြာပြီး အခုမှ ခြက်နည်းတွေ့ရတော့တယ်.. ကျေးဇူတင်တယ်ဗျာ.။
အမ နတ်မတ် ဆိုတာ ဇာတိပ်ဖိုလ် သီးထင်တယ်… အနာကျက်လွယ် ပီး အမာ၇ွတ်မကျန်စေတဲ့ အစွမ်းလည်း ၇ှိတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်…..
ဇာဒိပ္ဖိုသီး ဇာဒိတ်ဖိုသီးပါ။ ၀က်ခြံပေါက်ရင် သွေးလိမ်းတဲ့ အရာ။ ဂဠုန်လက်သဲ သီးလို့ လဲခေါ်ကြပါတယ်။
Hla Yamin Khine says:
Zar Nyi Aung says:
https://www.google.com/search?hl=en&newwindow=1&tbo=d&site=&source=hp&q=nutmeg&oq=nutmeg&gs_l=hp.1.0.0l10.1287.3577.0.5358.6.4.0.2.2.0.98.364.4.4.0.les%3B..0.0…1c.1.CSoyELDXeIs ဒါဆိုရင်ရှာလို့ လွယ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်
Tint lin oo says:
Thank u very much wutyee .
ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် အခုလိုအကျိုးရှိတဲ့websiteကို တင်ပေးထားတဲ့အတွက်အရမ်းလဲဂုဏ်ယူပါတယ် တွေ့တာနောက်ကျသွားတယ် ကျွန်တော်နဲ့မ၀တ်ရည်နဲ့ဝါသနာတူတယ် ဖော်ပြထားတာတွေအကုန်လုံးလုပ်စားကြည့်မယ် မသိရင်ကူညီနော် အမေးအမြန်းတော့ထူတယ် စိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့ကြိုပြောပါရစေ
I don’t mind 🙂 Thanks
၀တ်ရည် နည်းအတိုင်းလုပ်စားကြည့်တာတကယ်ဖြစ်တယ် ..
comment က မဆိုင်တဲ့နေ၇ာမှာေ၇းသလိုတော့ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ၀က်ခြေထောက်စွပ်ပြုတ်ကို တစ်ခါက ဒီ website မှာ တွေ့ဖူးသလိုပဲ။ ဒါနဲ့ search box မှာ ၇ှာတာ မ၇ှိဘူးလို့ ပြနေတယ်။ တစ်ခြားဟင်းတွေ (သေချာပေါက် ဒီwebsite မှာ တင်ထားတဲ့ နာမည်အတိုင်း type၇ိုက်၇င်လည်း အလွယ်တကူ အဲဒီ page က ပေါ်မလာဘူး။ ဆိုတော့ နောင် အချိန်ကြာမှ အဲဒီဟင်းမျိုး ဟင်းချက်စားဖို့ ပြန်ကြည့်ချင်၇င် အဆင်မပြေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက suggestion လေးပါ။ ကြည့်သူတွေအတွက် ပိုအဆင်ပြေဖို့ပေါ့။
ဟုတ်ကဲ့.. ၀က်ခြေစွပ်ပြုတ် ချက်နည်းကို http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=2025 ကြည့်လိုက်ပါနော်.. ဟုတ်တယ် search မှာက စာလုံးပေါင်း နည်းနည်းမှားသွားရင် ဟင်းတွေ ရှာလို့ မရတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ဟင်းတွေ ပြန်ရှာချင်ရင် ချက်ပြုတ်နည်းများ page: http://www.wutyeefoodhouse.com/?page_id=615 ကတဆင့်ရှာရင် ပိုလွယ်ပါတယ်.. ကျေးဇူးပါ…
ရ မရ တော့ မသိဘူး အခုတော့ ချက်နေပြီ အရင်တွေ့ကထဲကချက်ချင်နေတာမအားသေးလို့ ကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးအုံးနော်
haaa ok mar par 🙂
အစ်မရေ ကျေးဇူးပါ ဟင်းချက်ဝါသနာရှင်တွေအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဆိုက်လေးပါ ချက်နည်းတွေကိုလည်း လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာရေးထားပေးတယ် အရမ်းကောင်းပါတယ်
Thanks also par 🙂
ဖတ်ရတာနဲ့ တင်ဗိုက်ဆာလာပြီဗျို့ ….ပိတ်ရက်ကျမှ့ ဘဲတ၀ကြီးချက်စားလိုက်တော့ မယ်…
လူသားတွေကိုအကျိုးပြုတဲ့ website လေးပါ…
၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် 🙂
[…] ၀က်သားတုတ်ထိုး အိမ်မှာလုပ်စားကြည့်… […]
ကျေးဇူးတင်တယ်နော် မ၀တ်ရည် ညီမက၀က်သားမစားလို့ မလုပ်တတ်ဘူးဖြစ်နေတာ
အမျိုးသားကို လုပ်ပေးချင်လို့ ရှာနေတာလေ အခုမှလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရတော့မယ်
Plz try sis!
Can you also please share how to make the sauce?
I will try post this sauce recipe soon! Thanks
ဇာဒိတ်ဖိုလ် သီးမပါ လဲရလား ။ အဲဒီ အသီးက စားလို့ ရတာပေါ့နော် ။
ရပါတယ်။ စားရတဲ့ အသီးမဟုတ်ဘူး။ လက်မရွယ် ဇာဒိတ်ဖိုလ်သီးစေ့ကို ခြစ်တံနဲ့ ခြစ်ပြီ ရလာတဲ့ အမှုန့်လေးတွေကို ဟင်းထဲ ထည့်ချက်ရတာပါ။ အနံ့မွှေးအောင်ပေါ့
[…] ၀က်သားတုတ်ထိုး […]
ညီ မ ရေ ကျေး ဇူး ပါ ခု ခေတ် မှာ ဟင်း မချက် တတ် တာ ကို လူ လည် ခေါင် မှာ ကြွား နေ တဲ့ သူ များ နေကြ တဲ့
အ ချိန် မှာ ညီ မ လို ဟင်း ချက် တတ် သူ တင် ပေး တာ ဂုဏ် ယူ ပါ တယ်
ဟုတ် ၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးပါနော်.. 🙂
လုပ်စားကြည့်တာအရမ်းကောင်းပါတယ်။ လွယ်ကူတဲ့နည်းလေးတွေညွှန်ပေးတဲ့ အစ်မဝတ်ရည်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Very glad to hear you like it 🙂
၀က်သားတုတ်ထိုးနဲ.စားဖို.ဖြစ်ဖြစ်၊ ကြေးအိုးနဲ.စားဖို.ဖြစ်ဖြစ် တွဲဖက်စားတဲ့ အချဉ်ရည် (ဆော့စ်) လုပ်နည်းလေးပါတင်ပေးပါလား အမ။
I will try to post later sis
ကျေးဇူတင်ပါတယ်ညီမလေး၇ယ်။ ညီမလေး၇ဲ့ website ကိုတွေ့ လိုက်၇တာ မမအတွက်ထီပေါက်သလိုပါပဲ။ ခုတော့ မမစားချင်တာတွေကိုညီမလေး၇ဲ့ website ထဲမှာ၇ှာပြီးကိုယ်တိုင်ချက်စားလို့၇ပြီး။
Lwin May Thet says:
wut yee, today, I’ve tried cooking it at home, and the taste was perfect. My family aslo enjoyed it. Thanks you naw 🙂
Very glad to hear you enjoyed it 🙂 🙂
ကျေးဇူးတင်တယ်နော် ညီမလေး ၀က်သားတုတ်ထိုးကောင်းကောင်း မလုပ်တတ်ဘူးဖြစ်နေတာ
အခုမှလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရတော့မယ် ၀က်သားတုတ်ထိုးဆိုင်ဖွင့်နိုင်တဲ့အခါ ကျေးဇူးကြီးကြီးဆပ်ပါ့မယ်
မ၀တ်ရည်ရေ မန္တလေး ထမင်းပေါင်းလုပ်နည်းလေးသိချင်လို. သိရင်တင်ပေးပါလားဟင်…
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်… ရန်ကုန်မှာ ရောင်းနေကျစတိုင် ထမင်းပေါင်း လုပ်နည်းကိုတော့ ဒီလင့် http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=139/ မှာရေးထားပါတယ်..
So nice. Have to try at home.
Thank you so much ပါအမရေ တုတ်ထိုးဆိုအရမ်းကြိုက်တာမလုပ်တတ်လို့ အခုမှဘဲအဆင်ြေ့တော့တယ်
min min hla says:
Thanksalot. လုပ်စားကြည့်အုံးမယ်
May Myat Wah says:
မ၀တ်ရည်ရေ… မရှင်းတာလေးမေးချင်လို့…. “၀က်အူမအတွက် ၀က်အူကို ပြောင်းပြန်လှန်ပြီ ၃ထပ်လောက် အစာသွပ်ပေးပါ” ဆိုတာ ဘယ်လိုလုပ်ရလဲသိချင်ပါတယ်။ ကြားဖူးတာက ၀က်အူက ဆေးကြောရတာခက်ပြီး ဆေးတာမစင်ရင် အနံအသက်ရှိတယ်ဆိုလို့ပါ။ ဆေးကြောနည်းလေးပါ ပြောပေးပါနော်။ ကျေးဇူးပါ။
၀က်အူမကို တချို့က အနံ့ပျောက်အောင် မကျဉ်းရည်(သို့)ထုံရည်ကြည်နဲ့ ဆေးကြောပါတယ်။ ၀တ်ရည်က ဗီနီကာနဲ့ နုယ်ထားတာမို့၊ အနံ့ လုံးဝ မထွက်ပါဘူး။ အရင်ဆုံး ၀က်အူကို ရေသန့်စင်အောင် ဆေးပြီရင် ၀က်အူကို ပြောင်းပြန်လှန်ပေးရပါတယ်။ ပြီမှ ဝက်အူကို ၃ပိုင်းဖြတ်ပြီ သုံးခေါက်အထဲကိုပြန်ထိုးထည့်ကာ အစာသွပ်ပေးရတာကို ပြောတာပါ။ 😉
အဲ့ ၄ခု က ခက်တာ ၀တ်ရည်ရဲ့… ၀ယ်ထားရင်ရော ဘယ်ဟာ ဘယ်နှစ်လလောက် ရေခဲသေတ္တာမရှိပဲထားလို့ရနိုင်မလဲ… နတ်နတ်ပွင့် ပဲဝယ်လို့ရပြီး ကျန်တဲ့ ၃ ခုဝယ်မရရင် အရသာတော်တော်ပျက်သွားနိုင်လား…???
ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေက ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထည့်ထားဖို့ မလိုပါဘူး။ အပြင်မှာပဲ ဘူးနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် သိမ်းထားလို့ ရပါတယ်.. ၄လ၊ ၅လလောက်တော့ ခံပါတယ်။ နတ်န်တ်ပွင့်ပါရင် မဆိုးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ၀က်သားတုတ်ထိုး အနံ့တော့ နည်းနည်း လိုမှာပေါ့…
အခုပဲဆိုင်မှာဝက်သားတုတ်ထိုးသွားစားတာ မစားခဲ့ရလို့အခုလိုလုပ်နည်းလာကြည့်တာ အိမ်မှာပဲလုပ်စားတော့မယ် မမ ကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
U Than Naing says:
၀က်သားတုတ်ထိုးကို စီးပွားဖြစ်လုပ်ရောင်းရင် ပျားရည်အစား ဘာထည့် ရင်ကောင်းမလဲ အကြံဥာဏ်ပေးပါနော်
သကြား ထည့်လို့ရပါတယ်.. 😉
ကျေးဇူးပါ ၀တ်ရည် စမ်းလုပ်ကြည့် ဦးမယ်
၀တ်ရည်ရေ ၀က်အူမအတွက် ၀က်အူကို ပြောင်းပြန်လှန်ပြီ ၃ထပ်လောက် အစာသွပ်ပေးပါ။အဲဒါ ဘာနဲ့ အစာသွပ်ရမှာလဲ ၃ထပ်လောက် ဆိုတာ ၃ခါ လား ကျေးဇူးပြု ပြီးဖြေပေးပါဦးနော်
ကြေးအိုးလုပ်နည်းက ဒီလင့်မှာပါ Bro http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=4696/ 🙂
lin ei ei bo says:
Hnin Nu Yee Htwe says:
ကျေးဇူးကြီးပါတယ်ဝတ်ရည်… ညီမတို့လို နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေသူအဖို့ ၀တ်ရည်ရဲ့ website ကိုတွေ့လိုက်တော့ အရမ်းပျော်သွားတယ်…ကိုယ်စားချင်တာလေးတွေလုပ်စားခွင့်ရတော့မယ့်အတွက်ကြောင့်လေ… ကျေးဇူးပြုပြီး ဒန်ပေါက်လုပ်နည်းလေးများရှိရင်တင်ပေးပါအုန်းနော်… အားကိုးပါရစေနော်…
၀က်သားတုတ်ထိုးတရုတ်ငံပြာရည် ချက်နည်းလေး တင်ပေးပါ အမ
Hnin Mon says:
Narr nat pwint ko English lo bal lo call lal? bal lo buy ya ma lar?
Starnut par 🙂 City Mart မှာ ၀ယ်လို့ရပါတယ်
အစ်မရဲ့ website ကိုရှာတွေ့လို့အရမ်းပျော်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တုတ်ထိုးလုပ်စားဖို့က Tan Choon Hwa မရှိရင် အချည်ရည်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ? ဖြစ်နိုင်ရင် လုပ်နည်းလေးတင်ပေးပါလား
လုပ်စားကြည့်ပါနော် bro 😀
မကဲ့ရဲ့ ရဘူးနော် စားကောင်းပါ့မလားမသိ……
ဟုတ်ကဲ့ လုပ်စားကြည့်ပါ bro.. ဟီးဟီး Bro လက်ရာက စားကောင်းမှာ သေချာပါတယ်.. 😀
အမရေ.. တစ်ခုသိချင်တယ်.. အူကို သုံထပ် သွပ်တာ ဘယ်လိုလုပ်ပါသလဲ.. ကျန်တာတွေ အောင်မြင်တယ်.. သူကို ဆိုင်တွေလို မသွပ်တတ်လို့ပါ..
၀က်အူမအတွက် ၀က်အူကို ပြောင်းပြန်လှန်ပြီ ၃ထပ်လောက် အစာသွပ်ပေးရမှာပါ..
Khin Thet Swe says:
Hi sis, I did wash/clean the inside of sweet intestine. So, could not get the same shape & taste as outside shop. Is it eatable the sweet intestine without cleaning inside?
အမ ရတယ် အတွင်းအပြင် လှန်လိုက်တာ. ညီမ လုပ်ကြည့်တာ ၀ယ်လာတဲ့အူကဖြတ်ဖြတ်ထားလို့ ချော်မထွက်အောင်ညီမ က ချိတ်နဲ့ တွယ်ပြီး မှသွားကြားထိုးတံ နဲ့ ထိုးလိုက်တယ် အဲံဒါလုပ်တာ၄၅မိနစ်ကြာသွား.. ဒါပေမဲ့ ဖြစ်သွားတယ်
အမရေ အမနည်းနဲ့ချက်တာအောင်မြင်တယ်.. အာ့လာပြောတာ
ဝက်လက်ကို မုန့်ညင်းနဲ့စွပ်ပြုတ်လုပ်စားမလို့ အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိလို့ပါခင်ဗျ ပြန်ပြောပေးလို့ရရင်ပြောပေးပါ